Adeegga online lacag la'aan ah. dayrarka xisaab
Xisaabinta qalabka dhismaha, waayo, deedka ku
width ee dhagarta X
Dhererka dhanka bidix Y2
Dhererka dhanka midig Y
Masaafada u dhaxaysa tiirarkeedii S3
width ee irdaha iyo gool S1
Price 1 post
tayadoodii masaafada u dhexeysa tiirarkeedii
qalabka Select for teed
Cabirka waa in inches
dhinacyada waa in mitir. Liiska
Price per 1 duub oo mesh
Dhererka of guddiga
oo dhumucdiisuna waxay guddiga
wax sheet The
width Guud ee xaashida
width ee xaashida waxtar leh
Price 1 sheet
xisaabinta of deedka ku
Barnaamijka wuxuu xisaabiyaa tirada tiir loo baahan yahay si loo soo dajiyo xayndaabka.
Sidoo kale xisaabi farqiga u dhaxeeyay posts iyo xisaabinta qadarka wax xayndaabka: mesh silig, loox ama wax sheet.
Si aad u ogaato qiimaha qalabka dhismaha loo isticmaalo, cadee qiimaha ay shabakadda tafaariiqda ee degaankaaga.
Haddii aad calaamadiso "tayadoodii masaafada u dhexeysa tiirarkeedii", barnaamijka si siman u qaybin doonaa posts xayndaabka dhinac kasta oo ka mid ah goobta iyo wax ka beddelo fogaanshaha iyaga u dhexeeya.
Ogsoonow in ulaha iridda ku jira xisaabinta.